FITSARANA AMBONY ATY ANTSIRANANA : Nankalaza ny faha10 taona nijoroany
Nankalaza ny faha10 taona nisian’ny Fitsarana ambony ireo fianakaviambe ny Fitsarana taty Antsiranana, ny alatsinainy 2 desambra teo. 3 décembre 2019
Araka izany dia natao teo anoloan’ny lapan’ny Fitsarana ambony taty an-toerana ny varavarana misokatra ho an’ny Fitsarana ambony sy ireo sampan-draharaha miara -miasa akaiky amin’ny Fitsarana toy ny polisim-pirenena, zandary, Bianco, ireo mpisolovava, vadintany sy ny hafa. Nahitana ireo mpiasan’ ny Fitsarana ambaratonga voalohany avy eto Antsiranana sy ny avy any Antalaha, Nosy Be ary Ambanja nandritra izany. Misokatra ho an’ny rehetra izany ary afaka mametraka fanontaniana amin’izay liana amin’izany.
Tonga taty an-toerana ny minisitry ny Fitsarana Randrianasolo Jacques, notronin’ireo olo-manan-kaja sivily sy miaramila avy aty an-toerana ary ny fianakaviamben’ny Fitsarana avy aty Diana sy Sava.
Nandritra ny folo taona nisian’ny Fitsarana ambony taty Antsiranana, ny 2 desambra 2009 ka hatramin’ny 30 novambra 2019, dia voalaza fa nahatratra 97,55% ny raharaha heloko bevava voatsara notsarain’ny Fitsarana ambony, ary nahatratra 6096 ireo antotan-taratasy voaray. Notoloran’ny minisitry ny Fitsarana mari-pankasitrahana ireo mpiasan’ny Fitsarana ambony niasa tao nandritra izay folo taona izay.